I-Maple Suite - Ashford Acres Inn - I-Airbnb
I-Maple Suite - Ashford Acres Inn
Ilungele ukuhamba ngempelasonto kwamantombazane alapha e-Cynthinana, e-Kentucky, i-Maple Suite iyakwamukela ngemfudumalo ebanzi. Le ndlu yesitezi sesibili iqokwe ngamathoni athambile aluhlaza, abomvu, nasagolide: imibala efanayo egqamile etholakala unyaka wonke ezihlahleni zeMaple ezizungeze indlu.
Igumbi lethu elinamakamelo amabili okuwukuphela kwalo linombhede wenkosi wesitayela sekhulunyaka le-18, kanye nemibhede yosuku engamawele amabili egunjini elincane elixhumene. Yomibili le mibhede yasemini inama-trundle, okuvumela izivakashi ezifika kwezimbili (ezifika kweziyisithupha sezizonke): ilungele ukubaleka komndeni wakho. I-Maple Suite inendawo yomlilo yegesi kanye nendlu yokugezela yangasese enobhavu wokugeza kanye neshawa. Okuwubukhazikhazi, amalineni athambile, amajazi athokomele kanye neziliphu, umabona kude ohlakaniphile, i-inthanethi engenantambo, izilawuli zokushisa, nezinto zangasese ezinuka kamnandi, ezihambisana nemvelo zizungeze lesi sikhala esimemayo. Buka imuvi esofeni elithokomele, jabulela inkomishi yekhofi ngenkathi ubuka le ndawo efasiteleni lakho, noma ufudumeze izinzwane zakho eduze kweziko. Noma ngabe yini oyifunayo lapho uhlala nathi, i-Maple Suite izokusiza ukuthi uyithole.